RIYAHA MA IMANAYAAN UGAADHSIGA: WAXA LA SAMEEYO, SIDA LOO XAJIYO IYO SIDA LOO DAAWEEYO, VIDEO - RIYO
Riyaha ma imanayaan ugaadhsiga: siyaabaha lagu kicin karo ugaadhsiga
Sababta ugu weyn ee beeraha lo'da ah waa awooda xayawaanka si ay u dhalaan caruur. Tani mulkiiluhu waa inuu si fiican u yaqaanaa sida haweenku u dhaqmayso marka ay timaaddo. Iyo, dabcan, waxa la sameeyo haddii taasi aysan dhicin iyo sababta.
Goorma ayuu ugaarsiga u bilaabaa caadi ahaan?
Qaangaadhka riyaha yar yar wuxuu ka bilaabmaa 7-9 bilood, laakiin waxaa lagu talinayaa marka dheddigu gaaro 1.5 sano. Xilliga qaboobaha wuxuu inta badan ku dhacaa muddadii u dhaxaysey Sebtembar ilaa Disembar. Gabadh aan dherer lahayn ayaa soo gashay gawaarida dayrta 14-20 maalmood oo kasta, xilliga qaboobaha iyo guga horraantii 20-30 maalmood.
Waa muhiim! Si xayawaan ilmo yar ah looga soo qaado riyaha, waxaa suurtogal ah in lagu kashifo hiddaha galmada ee xilli-dugsiyeedka, tusaale ahaan xiliga gu'ga ama xilliga xagaaga.
Tilmaamyada ugu muhiimsan ee bilawga ah ee estrus ee riyaha waxaa ka mid ah:
jinsiga dibedda oo barara oo noqda casaan;
xayawaanku wuxuu bilaabmaa inuu si xushmad leh u dhaqmo oo xitaa si gardaro ah;
lumitaanka rabitaanka cuntada;
Dumarku waxay si joogto ah u qulqulayaan iyagoo raadinaya nin;
inta badani waxay lumisaa daboolkiisa;
xabku waa ka qarsoon yahay xubinta taranka, taas oo ah mid culus iyo cadad ah bilowga estrus, hufnaanta iyo dareeraha dhexe, qaro weyn iyo caddaan ah dhammaadka.
Laakiin waxaa jira xaalado marka ariga la soo saaray baaluq, oo aaney waligeed imanin. Waxaa jira dhowr sababood oo sababta xayawaanku u socdaan.
cayil ama daal - waxay ku dhacdaa cunto aan habooneyn;
la'aanta fitamiinada iyo nafaqooyinka muhiimka ah ee cuntada;
cudurrada xubnaha xubnaha taranka - badanaaba sababtu waa calaamad uur;
dhibaatooyinka hoormoonada - waxay ka timaadaa dheef-shiid kiimikaad aan habooneyn;
xaalad walaac leh - kicin kasto ayaa sabab u noqon karta;
isdhexgalka wareegga galmada ee lo'da oo dhan oo riyaha ah, marka ay isku mar wada daboolaan.
Maxaa dhacaya haddii riyuhu uusan u imaan si uu ugaarsado
Haddii ay sabab u tahay la'aanta estrus ee dumarka waa daryeel aan habooneyn xayawaanka iyo nafaqada liidata, markaa taasi waa la tirtiri karaa iyadoo la saxayo qaladaad hore. Laakiin maxaa dhacaya haddii dhacdooyinkani aanay ku caawin? Waa lagama maarmaan in la raadsado caawimaad ka timid daroogada sababaysa daroogada riyaha, iyo sidoo kale qaab aan lahayn daawooyinka.
Thanks to daawooyinka caafimaadka, waxaad hagaajin kartaa kicinta estrus ee riyooyin.
Waa muhiim! Gali wax daawo ah oo keliya ayaa lagama maarmaan u ah ujeedada looyarka xoolaha, iyo inaadan adigu sameysid.
Si arrintan loo sameeyo, isticmaal:
qashin - waxay maareynayaan googo mareenka 0.7 ml laba jeer maalintii. Haddii aan waxba la bilaabin, ku celi nidaamka 10 maalmood ka dib;
ovariowitis - Kaadi ahaan hal mar oo ah 1.5 ml 1.5 bilood, waa lagama maarmaan in la soo saaro iyadoo la raacayo qorshaha;
qanjirada - 2 ml oo garaac ah, ku celceli 14 maalmood ka dib;
Surfagon - gudahiisa oo ah qiyaasta 2-3 ml;
progesterone - 0,01 ml 1kg oo garaac ah oo miisaanka nool;
nacasnimo - 2-3 ml oo gaaban;
fitamiinada A, E, trivitamin, tetravit, iwm.
Video: laba siyaabood oo lagu kicin karo riyaha riyaha
Haddii aan la isticmaalin daawooyinka
Waxa suurtagal ah in si cad loo jiido ugaadhsiga xayawaanka iyada oo aan u adeegsanin caawinta daawooyinka.
Hababkaan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Dumarka ayaa la xiray oo labka ah, ka dib markii ariga oo muujinaya calaamadaha hargabka;
Xilliga dayrta hore, dhogorta riyaha ayaa lagu tirtiraa cawska la qalajiyey si ay u nuugaan urkooda. Markaas, guga hore, waxay ku quudiyaan riyo;
Markaad gadaneyso gabadh, waxaa ugu wanaagsan inaad iyada la socoto ragga;
si aad u sameysid dammaanad qasab ah, ka dib markii bacriminta aysan mar walba dhicin, laakiin gabbaadku wuxuu ka yimaadaa haweenka.
Ma taqaanaa? Riyaha ayaa aad u sahlan in ay u dulqaadaan dhaxan iyo kuleyl aad u qoto dheer cimilada qoyan.
Goorma ayuu u baahan yahay kicinta riyaha?
Xannibaadda dumarka waxaa lagu fuliyaa xaaladaha soo socda:
Xaaladda marka xayawaanku ay soo gaareen qaangaadhka, laakiin ugxantu marna ma dhicin sababo kala duwan;
marka la isku kalsoonaanayo marka xayawaanka la isla mariyo isla markaa;
marka goosashadu sii wadi waayaan ka dib markii laysku daro.
Haddii ariga uusan u imaanin ugxumada xilligaas, macnaheedu ma aha in wax kasta ay xun yihiin waana lagama maarmaan in laga takhaluso haweenka. Sababta ah in dabeecaddani ay noqon karto cunno aan caafimaad qabin oo cirib-tiran ama xanuunka dheef-shiid kiimikaadka. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan, adoo raacaya talooyinka liiska, si looga saaro sababaha ugu muhiimsan ugana caawino xayawaankaaga.